प्रतिगमनको खतरा टरेको छैन : डा. बाबुराम भट्टराई – News Dainik
प्रतिगमनको खतरा टरेको छैन : डा. बाबुराम भट्टराई
News desk १४ चैत्र २०७७, शनिबार ०९:३१ विविध, समाचार प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषदका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिगमनको खतरा नटरेको बताएका छन् । सामाजिक संजालमा टिप्पणी गर्दै डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिगमनकारीसँग लेनदेन गरेर क्षणिक लाभ लिने कि उसलाई विदा गरेर संविधान/लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै थप अग्रगमनको दिशामा लाग्ने दुई विकल्प रहेको बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्- ‘प्रतिगमनको खतरा टरेको छैन ! प्रतिगमनकारीसँग लेनदेन गरेर क्षणिक लाभ लिने कि उसलाई विदा गरेर संविधान/लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै थप अग्रगमनको दिशामा लाग्ने दुइ विकल्प अगाडि छन् ! पहिलो बाटो तुलसी गिरी/केशरजंग रायमाझीको र दोश्रो बाटो बिपी/पुष्पलालको हो ! वुद्धि/विवेकको प्रयोग गरेर आफै रोजौं !’
अघिल्लॊ केबिनमै महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने चिकित्सक निलम्बित
पछिल्लॊ मेहनतले मेलम्ची सफल भयो : पूर्वमन्त्री मगर